မှာခဲ့ ပါရစေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » မှာခဲ့ ပါရစေ	7
Posted by တောတွင်းပျော် on Apr 5, 2015 in Creative Writing, Poetry |7comments
ပြောင်မစပ်နိုင်တော့ တဲ့ကြေကွဲကဗျာ
ဘဝကိုစတေး၊ အသက်ကိုပေးဖို့ 
လည်ဝပ်စင်းလို့ခံခဲ့ ရပြီကွယ်။
ဖေကြီး၊ မေကြီး အကိုကြီးနဲ့ 
ကျနော် မိုက်မှား၊ ရှိသမျှအပြစ်များ
ကန်တော့ ခဲ့ ပါရစေ။
I LOVE YOU နော်…..
ရင်ထဲက စကား၊ နောက်ဆုံးစကား
ပူလောင်မှုငြိမ်း၊ အငြိုးတရားကင်းတဲ့ 
အေးချမ်းတဲ့ကမ္ဘာအသစ်ဆီ
အမှန်နဲ့အမှား
အပြုံးနဲ့အငို
အပေးအယူ အားလုံးကိုစွန့် လွှတ်
ဥပေက္ခာ ခြေလှမ်းရွေ့ ရင်း
ဟို… နေဝင်ရာ မိုးကုပ်တဖက်ဆီက
ဘိုးဘေးတို့ တစ်တွေရဲ့ 
သာယာစွာ သီဆိုကခုန်နေကြတဲ့ 
စိတ်အစဉ် ဦးညွှတ်လို့ 
ဖြည်းငြိမ့်ညင်သာ
လွင့် ပါးလို့ရောက်ခဲ့ ပြီလေ။
သတင်း ဓါတ်ပုံတွေထဲက အစွန်းရောက်တွေရဲ့ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခံရတော့ မယ့် 
သူတွေရဲ့ ပုံတွေမြင်တွေ့ မိလို့ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ခံစားရေးဖွဲ့ မိလိုက်တာပါ။
ရေးချင်တာတွေ လျှောက်ရေးနေတဲ့ 
lu lu says: လူ့ ဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခ တွေပေါ့ နော်
ဘဝဆိုတာ အမှားအမှန်ဝေခွဲလို့ မရနိုင်လောက်အောင်
ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ သောက ဒုက္ခ တွေ က အသက်ဆုံးတဲ့အထိပေါ့
Alinn Z says: အစွန်းရောက်တွေကို ကြည့်ပြီး
အစွန်းမရောက်အောင် တွေးခေါ် နေထိုင်ဖို့ သင်ယူနေမိတာာာာာ
Mike says: .တစ်နေ့ကလည်း အစွန်းရောက်တွေ တက္ကသိုလ်တစ်ခုကိုဝင်ပစ်တာ ၁၄၀တောင်သေသတဲ့
Mike says: .
ကင်ညာနိုင်ငံကတက္ကသိုလ်တခုမှာ Al-Shabab စစ်သွေးကြွတွေ သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ ၁၄၈ ယောက်အတွက်ရည်စူးပြီး ယေရှုခရစ်တော် ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ Easter Sunday နေ့ကို ဆင်နွဲနေကြပါတယ်။ ကင်ညာနိုင်ငံတဝှမ်း Garissa တက္ကသိုလ်မှာ သေဆုံးခဲ့သူတွေအတွက် အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနားတွေ ကျင်းပနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကြာသပတေးနေ့တုန်းက Garrisa တက္ကသိုလ်မှာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ပြီး သေဆုံးခဲ့တဲ့ သေနတ်သမားလေးဦးထဲမှာ အစိုးရအရာရှိတဦးရဲ့သား တယောက်ဖြစ်တဲ့ Abdirahim Mohammed Abdullahi လည်းပါဝင်နေတယ်လို့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရ Mwenda Njoka က ဒီကနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ပြောပါတယ်။ သူဟာ Mandera ဒေသ အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအရာရှိက သူ့သားပျောက်ဆုံးနေကြောင်း အသိပေးတိုင်တန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်း ပြောခွင့်ရ Njoka က ဆိုပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်း ကင်ညာ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲက စစ်သွေးကြွတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ် လုံခြုံရေးတွေရဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကာကွယ်ပြောဆိုပါတယ်။ အထူးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကိုရောက်ဖို့ မြို့တော် နိုင်ရိုဘီကနေလာရာမှာ အနည်းဆုံး ၇ နာရီလောက် ကြာပြီးမှ ရောက်ခဲ့တယ်လို့ ပြင်သစ် နယူးအေဂျင်စီတခုက အစီရင်ခံပါတယ်။ ဒါဟာ တခြားလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ စစ်သွေးကြွတွေ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်အပြီး နာရီအတော်ကြာမှ ရောက်ရှိလာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
တောတွင်းပျော် says: သူတို့ ရဲ့ရက်စက်မှုတွေက သူတို့ ဘာသာတူတွေတောင် လက်ခံလို့ မရနိုင်လောက်အောင်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: အခု ကျမ အစွန်းရောက်တွေအကြောင်း ဖတ်နေတာ။ အံ့သြစရာတွေချည်းပဲ။ သူတို့က ပညာတွေ ဘယ်လောက် တတ်တတ်၊ နိုင်ငံရေး အသိပညာတွေ ဘယ်လောက်တိုးတိုး၊ အစွန်းရောက်တာပဲတဲ့။ အဲဒါ ငယ်ငယ်က စာသင်ကြားပုံကြောင့် ပါတယ်တဲ့။ ခေတ်ပညာတွေ တတ်လို့ အစွန်းမရောက်အောင် မရှောင်နိုင်ဘူးတဲ့။ ငယ်ငယ်က စာသင်တာမှာ ဘာသာရေးက ပညာရေးကို လွှမ်းမိုးခဲ့လို့ပါတဲ့။ ကျမကတော့ IS တွေကို ချေမှုန်းတာကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ ဒါလည်း အစွန်းရောက်တာပဲလား မသိဘူး။
naywoon ni says: ဆရာမ​ရေ ကျ​နော်​က​တော့ သူတို့က အစွန်း​ရောက်​ဆို ကျ​နော်​က ဆန့်​ကျင်​ဘက်​ တစ်​ဖက်​စွန်းမှာ​နေ​ပေးလိုက်​တယ်​ ။ဒါမှ က​လေး​တွေ ဆီး​ဆော ကစားသလို balance ညီ​အောင်​လို့ပါ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.